OMN:Haala yeroo irratti turtii Hayyu Duree ABO obbo Daawud Ibsaa waliin taasifne Caamsaa 13,2020 – Kichuu
HomeAfaan OromooVideosOMN:Haala yeroo irratti turtii Hayyu Duree ABO obbo Daawud Ibsaa waliin taasifne Caamsaa 13,2020
OMN:Haala yeroo irratti turtii Hayyu Duree ABO obbo Daawud Ibsaa waliin taasifne Caamsaa 13,2020
Gaafifi Debii Hayu Dure ABO Obbo Dawud Ibsa OMN Woliin Godhan Dhagefadha
ሰበር ዜና! የ ሱዳን ጦር አማራ ክልል ላይ ጦርነት ከፈተ! Sudan | Gonder | Ethiopia
Dubbii gidduu kana deemaa jiru irratti yaada koo –
‘Lukkuun haatee haatee billawa ittiin qalamtu baafti’ jedhu mitii? OPDOn kun mooraalii maaliitiin badii waggoota 27 raaw’ataa baate Wayyaanee qofatti haqattee qulqulluu of fakkeessuuf dhamaati dhiiroo? Ummata Oromoo kana hangam tokko tuffatte? Sabni kun waan kaleessa dabre hin yaadatu, har’as itti taphachuu dandeenya jettee yaaddii laata? Haquma dubbachuuf Osoo galtuu fi saba gurgurtuun akka OPDO Oromoo keessaa hin biqillee Wayyaaneen waggaa 27 dhiisii sa’aatii 27f Oromiyaa keessa buluu abadan hin dandeessu ture. Kun haqa hin haalamnee dha. Nama keenya magaalaalee fi aanaalee Oromiyaa cufa keessa deemee kan kallattiin guuree hidhaa fi ajjeesaa tures OPDO mataa ishiiti. Kana sirriitti ragaa bahuu dandeenya.
Wanjala Wayyaanee fi OPDO wal biratti yoo laalle akka armaan gadiitti gabaabsanii ibsuutu danda’ama.
– Wayyaaneen yakka guddaa TOKKO raaw’atte. Sunis OPDO qabattee ittiin Oromiyaa ukkaamsuu fi saamuu dha. Manneen hidhaa Federaalaa keessatti kallattiin kan hidhamtoota dararaa fi ajjeesaa ture Wayyaanee dha. Imaammata ukkaamsaa baafachuun ajaja raaw’annaa yakkaa OPDOtti kan dabarsaa fi raaw’achiisaa ture Wayyaanee dha.
– OPDOn yakka gurguddaa LAMA raaw’atte. Tokko ajaja Wayyaaneetiin ergamtee saba keessaa dhalatte irratti kan raaw’attee dha. Kan lammaffaa ammoo aangoo Oromiyaa keessatti qabduun murtee mataa ishiitiin kan Oromoo irratti raaw’attee dha. Sadarkaa gandoota, aanaalee fi godinootaa Oromiyaa keessatti yakkoota raaw’atamaniif kallattiin kan gaafatamu OPDO dha. Manneen hidhaa godinootaa fi aanaalee Orimiyaa keessatti kan nama keenya hiraarsuu ture OPDO dha. Har’a Wayyaaneen kuftee ganda ishiitti galteetti jettee arraba tottolfattee qulqulluu of fakkeessuuf Wayyaanee qofatti quba qabuun qulqulluu ishii hin godhu. Dhugaa kana gara dabarsuuf jecha har’as deebitee dunuunfadhaa isinin gowwoomsaa jechuun yeroo sadaffaa Oromoo madeessuu dha.
Walumaa galatti dubbiin kun dubbii seenaa duratti bor murtee argachuuf deemuu dha. Wayyaneen alagaa dha. Diina fagoo irraa nu cabsuuf karoorfatee dhufee dha. Diinni fagoo tokko dantaa isaaf jecha waan danda’e kamuu ni godha. Sun waanuma diina fagoo irraa eegamu. Kan OPDO garuu diinummaan kan Wayyaanee caala. Saba ofii keessaa dhalatte gantee diinaaf meeshaa taatee saba ofii waraante. Halagaa sin beeyneen waraanamuurra obboleessa kee tiruu kooti jettee abdattuun ganamtee waraanamuutu caalaa si dhukkubsa. Kanatu laalaa OPDOn nu laalessite kan Wayyaanee caalaa hamaa taasisa. Yakki OPDO kana qofaanuu osoo dhaabatee waan tokko. Har’as gooftaa biraa jalatti galtee marraa lammaffaaf Oromoo gabrummaa jalatti owwaaluuf Nafxanyaa waliin taatee itti duulaa jirti.
Eritreans Sue E.U. Over Use of Forced Labor Back Home.
Fininnee Bulchiisa magaalaa buraayyuu ganda malkaa gafarsaatti